Gaadiidka - Dhaqdhaqaaqa
Waxaan caalamka u direynaa waqooyiga iyo koonfurta America, Europe, Asia, Africa, Oceania, iyo in kale. Waxaanu u shaqaaleynaa adeegyo badan oo caalami ah oo la aamini karo si loo hubiyo in boorsadaadu u timaado meel aad u socoto si ammaan ah oo ammaan ah.
Amarrada caadiga ah waxay qaataan maalmaha 7 si ay u hirgeliyaan ka hor inta aanay doonnayn - marka laga reebo dhamaadka todobaadka iyo ciidaha. Waqtiga xilliga fasaxyada lagu shaqeynayo waxay qaadan karaan maalmaha 14.
Amarada Maraykanku waxaa lagu soo wareejin doonaa e-baakada iyo Amarro Caalami ah ayaa la geyn doonaa iyada oo ku xidhan xarunta fulinta ee alaabadu ay ka timid.
Waqooyiga Transit Times ee Maraykanka: 12 - 20 Maalmaha Shaqada
Saacadaha Transit International: 10 - 21 Maalmaha Shaqada
Waxaa jira xaalado aan xakamayn (masiibooyinka dabiiciga ah, ciidaha, cimilada, iwm) taas oo sababi karta dib u dhigista maraakiibta. Inkasta oo baakadaha badankood ay wakhtigooda ku yimaadaan, waxaa jiri kara duruufo iyo daahitaan ah in ay dadkeenu la kulmaan. Sababtaa awgeed, ma xaqiijin karno waqtiga saxda ah ee keenista; Arrinta gaarsiinta waa mas'uuliyadda shirkadda maraakiibta.
MAXAA LOO ISTICMAALAYAA KA QAADASHO?
Adeegga gawaarida dhabta ahi waxay ku xiran yihiin xarunteena fulinta. Tani waa sababta oo ah alaabtayada waxaa laga helaa dalal kala duwan si loo hubiyo inaad hesho qiimaha ugu fiican. Adeegyada Courier way kala duwan yihiin waddanka oo dhan. Haddii aan lahayn ganacsi xoog leh oo adeegga gawaarida ah, waxaan awoodi karnaa in aan helno qiimo jaban sidaas darteed xawaaraha waxaan lumin doonaa suuqa caalamiga ah sida Amazon iyo wixii la mid ah.
Waxaannu ku dadaalnaa inaanu hoos u dhigno kharashka dhammaadkaaga si aanad u bixin inaad bixiso canshuur sare / caymiska sare si aad u hesho alaabtaada. Haddii aad amar nala siisid alaabooyin badan waxaa ka badan inta laga yaabo in la keeno in ka badan hal xirmo. Fadlan u ogolow waqti yar dhammaan alaabtaada in ay timaado.
Qiimaha lagu soo bandhigay rasiidhadaadalaga yaabo ha ka duwana waxa aad amartay laakiin fadlan ha walwalin. Caadi ahaan waxa xarunteena fulinta samayn lahayd waa in la calaamadiyo qiimo aad u hooseeya ama calaamadee alaabta sida hadiyado ah. Tani waa inaad ka hortagto canshuuraha / khidadaha soo dejinta caadooyinka ah ee lagu soo rogay dhammaadkaada iyadoo wadamada qaar ka mid ah qarashyada dheeraadka ah ay yihiin kuwo aad u qaali ah.
Fadlan hubso in emailkaaga uu sax yahay markaad amar bixiso. Si taxaddar leh u eeg liiskaaga SPAM si aad u aragto haddii emailkaaga xaqiijinta loo diray. Haddii ay jirto wali wax email ah oo xaqiijin ah, fadlan email u dir kooxdayada taageerada adoo isticmaalaya foomka xiriirka ee boggayaga
Qof kasta oo guriga jooga wuxuu heli karaa xirmada isagoo wakiil ka ah macaamiisha. Caadi ahaan, xaashiyaha ayaa ka tagi doona warqadda dhuxusha haddii qofna guriga joogin oo laga yaabaa inaad ka soo qaadatid xaafaddaada xafiiska boostada ee kuugu dhow.
Inkastoo aan si weyn ugu dhiirigelineyno inaad labalaabi karto qiyaasta iyo cinwaanada ka hor intaanad amar nala siinin, waxaan si buuxda u fahamsanahay in arrimuhu soo baxayaan iyo khaladaadka la sameyn karo. Waxaan xoojinnaa amarada isla maalintaas la dhigo. Haddii isbeddelka loo baahan yahay in lagu sameeyo amarkaaga fadlan nala soo xiriir adoo adeegsanaya foomka xiriirka ee boggayaga ASAP waxaanan samayn doonnaa sida ugu fiican ee aan ugu qanacsanahay isbedelkaas, laakiin ma sameyn karno wax ballan ah. Haddii sheyga (yaasha) horay looga soo diro xarunteena fulinta, ma sameyn karno isbedelka amarka. Xaaladdaas, waxaad alaabta kuugu soo diri kartaa Wareegga Gobalka ee kuugu dhow oo mar markaa waxaan heleynaa alaab sax ah. Fadlan nala soo xiriir si aad u ogaato meesha kuugu dhow Wareegtada Gobalka ee kuugu dhow ee wadankaaga.
Fadlan nala soo xiriir annaguna waan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalihiina!